सिनेमा समिक्षा : जालो
फ्रान्सेली फिल्ममेकर रोबर्ट ब्रेसन भन्छन् : ‘मेरा लागि सिनेमा दृश्यले लेखिने अभिव्यक्ति हो जहाँ ध्वनी मिसिएको हुन्छ ।’ आर्ट अफ सिनेमाका यी गुरु दृश्य निर्माण हुन सोच र सम्पादन बीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन् : क्यामेराले खिच्दैमा दृश्य बन्दैनन् । दृश्य बन्न मन गाँसिएको हुनुपर्छ ।’ क्यामेराका पिता लुमियर दाजुभाई पनि सम्भवतः चित्र र दृश्यबीचको यो भिन्नता बुझ्थे होला ।
रोबर्टको प्रस्तुत पंक्ति यहाँ उल्लेख गर्नुको सान्दर्भिकता पहिलोपटक सिंगल सट्मा खिचिएको नेपाली सिनेमा ‘जालो’लाई लिएर व्यक्त गरिएको हो । झन्डै २ घन्टा लामो अराज केशव निर्देशित फिल्ममा हरि लामाले क्यामेरा चलाएका छन् । मल्टिपल सट्मा फिल्म बन्ने ट्रेन्ड तोड्दै सिंगल सट्मा खिचिएको फिल्मले निश्चित सिनेम्याटिक मूल्यको निर्माण त गर्छ नै, कथा वाचनमा क्यामेरा प्रयोग, सोच र दृश्य उत्पादनको आगत प्रवृत्तिको विश्लेषण पनि गर्नेछ ।
मुख्य पात्र भूपेन्द्र (नीर शाह) मुलुककै ठूला व्यापारी हुन् । जब उनको महलमा टेलिफोनको घण्टी बज्छ, तब प्रहरी सामुन्ने एकाएक अनपेक्षित घटना हुनथाल्छन् । उनलाई अज्ञात नम्बर र व्यक्तिबाट फिरौती रकम माग गर्दै लगातार धम्की आउन थाल्छ, तब कथाले नयाँ मोड लिन्छ । यो रहस्य थाहा पाउन तपाईं हलसम्मै पुग्नुपर्छ ।
फिल्म र पात्रको लक्ष्य स्पष्ट भएकाले दर्शकलाई कथा सरल, सहज र बोधगम्य महसुस हुनेछ । पटकथा र क्यामेराको गतिको तादाम्यताले गर्दा दर्शक इन्गेजिङ हुनसक्छन् । जालोमा क्यामेराले कथा भन्छ र क्यामेरा नै कतिपय थलोमा स्वयम पात्र छ । जब क्यामेरा नै पात्र बनिदिन्छ तब दर्शक प्यासिभ होइन, एक्टिभ बन्छन् र द्धन्द्ध एवं पात्रसँग अन्तक्रिया गर्न थाल्छन् । जालो यसअर्थमा सशक्त छ । जालोले चित्र उतार्दैन बरु दृश्य उतार्छ । ती प्रत्येक दृश्यको प्रवाहसँग दर्शक बग्नसक्नु महत्वपूर्ण छ ।
क्यामेरा बग्छ । हामीले ग्राभिटी देख्यौं । अस्कर विजयी बर्डम्यान देख्यौं । जहाँ पात्र तैरिन्छन् र क्यामेरा बग्छ । क्यामेरालाई बगाउन सक्नु छायांकन खुबी हो । जालोसँगै दर्शक बग्छन् । यहाँ डुब्नु र तैरिनुको मजा अलग छ । निर्देशक र छायांकारको संचार क्यामेरा प्रयोगमा देखिन्छ । अर्थात पटकथा र दृश्य निर्माणको प्रवाह । जालोले एउटा यस्तो मान्यता स्थापित गर्छ, त्यो हो ः मान्छे होइन, बरु क्यामेरा सबैभन्दा ठूलो पात्र हो ।
तर, पात्र र सेटिङको सशक्त स्थापना विनै सिर्जना गरिएको द्धन्द्धले दर्शकसँग पात्रको सम्बन्ध उति गाढा लाग्दैन । यसो हुनुमा द्धन्द्ध स्थापना गर्ने र सोहीअनुसार क्यामेरा चलाउने निर्देशकीय नियत केन्द्रित भएर हो । द्धन्द्धको उतारचढावअनुसार ध्वनीको प्रयोगमा मिहेनत पुगेको छैन । यसले गर्दा इमोसन उचाइ निर्माणमा समस्या देखिएको छ । कथालाई क्यामेराले फलो गरिरहँदा फिल्मको गुदीमा आवश्यक प्रयत्नतर्फ ध्यान गएको छैन ।
विश्व फिल्ममा लङ टेकमा सिनेमा खिच्नुपर्ने दुई मुख्य कारण छन् । पहिलो : पात्र र परिस्थितीको इमोसन किल नहोस् भन्ने परिस्थितीमा । दोस्रो : प्राविधिकरुपमा क्राफ्टको सौन्दर्य जतन भैराखोस् भने बिशेष अवस्थामा । के जालो यी दुई विशेष परिस्थितीको उपज हो ? या विश्व कीर्तिमान राख्नुपर्ने मान्यताले मात्र खिचिएको हो ? लङ सट् लिनु पछाडि यी दुई विशेष कारण हुन्छन् । कारणले मात्र सिंगल सट् खिच्नुपर्ने परिस्थिती हुन्छ । नत्र, फिल्मको सौन्दर्य कायम हुन्छ भने मल्टिपल सट्मा खिच्दा पनि फरक पर्दैन । क्यामेरा दृश्य कथा भन्ने माध्यम न हो ।गल सट्मै भएपनि कमर्सियल प्याकेजिङको मुख्य स्तम्भ गीतलाई आकर्षक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले दर्शकलाई एकल सट् हो भन्ने कुरा बिर्साइदिन्छ र अतिततर्फ लैजान्छ । टाइम एन्ड स्पेसमा मिहिन ढंगले यति महत्वपूर्ण काम भएको छ कि, पाँच सेकेन्डमा अन्तरमा पनि कुनै कलाकारले भावनाको बदलाव उति नै गहिराइमा पुगेर गर्न सक्छ । यसका लागि मेनुका प्रधान बधाइकी पात्र छन् । निर्देशकीय प्रयत्न रहस्यलाई अन्तिमसम्म जोगाइराख्न र दोस्रो सिक्वेलका लागि पात्रको स्थापना गर्नुमा पनि सफल छ । यसअर्थमा जालो रिटन्र्सलाई सिक्वेल भन्न मिल्दैन, त्यो पहिलो भागकै समग्रता हुन आउँछ ।
तपाईंलाई सिंगल सट् के हो ? कसरी खिचिन्छ र यसरी खिचिने क्राफ्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जान्न जालो हेर्न जरुरी छ । यसभित्र फिक्सनका आयाम पनि छन् जसले तपाईंलाई मनोरन्जनका तत्व समेत उपलब्ध गराउँछ । फेरि पनि प्रश्न ः जालो निर्माण कुनै कारणले हो वा, कुनै मान्यताले अभिप्रेरित भएर ? बहस चल्दै गर्नेछ ।
सिनेमा : जालो
कास्ट : नीर शाह, रविन्द्र खड्का, मुना गौचन, रेमनदास श्रेष्ठ, नीराजन प्रधान
छायांकन : हरि घले लामा